HomeTurkeyBlack Sea Region52 ArmyEtinye ego iji mee ka mmamuta nke Boztepe dịkwuo elu
13 / 01 / 2020 52 Army, General, Black Sea Region, Turkey, TELPHER
itinye ego nke ga-abawanye mma nke boztepen na-abịa na ndụ
Ordu mepere emepe na-aga n’ihu n’itinye ego ndị ga-eme ka ịma mma nke Boztepe dịkwuo elu. N'ime usoro a, ụmụ amaala ga-enwe obi ụtọ na Boztepe nwere ụzọ ụzọ mbata okwute n'okporo ụzọ, ogige 27, nhazi ala ahịhịa.
N’ihe dị ka mita 500 si n'oké osimiri Boztepe’de Sales Units Buffet na Landscape Arparament Project malitere owuwu nke otu a, ndị ọbịa nwere ike ilele ala Odi ahụ mfe ma nye ha mpaghara ịzụta ngwaahịa obodo.
A GA-EKWUPETTA NA MET 600KỌ XNUMX
Obodo mepere emepe, Boztepe, obosara 7 mita na mita 600 n’ogologo, nke a na-eji ugbu a dị ka okporo ụzọ ụgbọala, ngo ahụ bidoro na-eme atụmatụ mpaghara ahụ niile dị ka ihe na-aga ije. A ga-eme ka ebelata ụkwụ, ọrụ ndị na-ere ahịa na nhazi ala mgbe a ga-eme ọfụma ahụ.
27 SALES UNITI GARA
N'ime oru a, a haziri ngwongwo azụmaahịa iri abụọ na asaa site na ịchọpụta ụdị ụlọ ọrụ ụlọ maka ịre ahịa oge niile. Site na ọrụ a na-arụ, ụmụ amaala nwere ike ịnụ ụtọ Boztepe ma nwee ọ enjoyụ ebe ha nwere ike ịga ije na ịzụ ahịa n'enweghị nsogbu ụgbọala.
“PERLỌ NCHE AGBARA 20”
Onye isi akwukwo nke Obodo ukwu Coşkun Alp na onye isi osote onye isi okwu Bülent Şişman nyochara ọrụ ndị ahụ. Onye isi ode akwụkwọ mgbasa ozi Alp kwuru, ından Ihe oyiyi agbasasị agbasokarị na Boztepe, otu n'ime ebe na-adọta mmasị na mpaghara Oke Osimiri Ojii. Thelọ ndị dị adị ebe a na-ere ihe ndị dị n'obodo ahụ nọ n'otu ebe na-anya ụgbọ ala. Citizensmụ amaala anyị chọrọ mpaghara site na Boztepe ebe ha nwere ike ilele Ordu mfe ma gaa leta ebe a na-ere ngwaahịa obodo. Iji kwụsị ọgba aghara a, Onye isi ala anyị Dr. Anyị malitere nkuzi ebe a na nkuzi nke Mehmet Hilmi Güler. Ejiri mmiri mmiri ozuzo na oruru mmiri na ihe ndị na-agbasa ebe a na-arụ ọrụ ahụ. A na-arụ ọrụ ndị na - ewu nchara nke kiosks ndị ahịa. Ihe niile dị ihe dịka pacenti iri abụọ. Anyi na-aga n’ihu n’ihu na-abawanye mma nke Boztepe n’ọrụ anyị na-eme na nke anyị ga-arụ
Nkwụnye ego na njem ụgbọ njem na-eme ka mma obodo dị ukwuu
Ihe Mgbakwunye Ụzọ na-eme ka okporo ụzọ gaa Malatya
Boztepe's Charm ga-eto site na ego
2 nke Mmezi Transportgbọ njem Ọha na Ordu. Oge na-abịa ndụ
Arkas Holding na-abawanye isi obodo maka itinye ego na ọdụ ụgbọ oloko…
E Kwesịrị Ịbawanye Ntụnye Ego na Ngalaba Akụkọlọtọ
Viaduct dagger ka obi Boztepe
İZBAN flights ga-eme ka amara mara Torbalı
Ọganihu dị elu ga-eme ka ndụ na mmekọrịta akụ na ụba na-akụdo
Onyinye nke obodo ga-eme ka ntinye ego nke okporo ígwè
Inye ego nke ndi India n'inwekwu uchu
A na-arụ ọrụ ụgbọ oloko Artvin na Gọọmenti Office
Yedikuyular Ski Centre na Ndụ
Ngalaba Nzuzo Boztepe Buffet na Ihe Nhazi Ala
Ala ndị agha